Antenimierampirenena :: Andrasana ny didin’ny HCC momba ny fanoloana an’ireo depiote migadra • AoRaha
Antenimierampirenena Andrasana ny didin’ny HCC momba ny fanoloana an’ireo depiote migadra
Miroso amin’ny fanoloana ny solombavambahoaka Raveloson Ludovic, voafidy tany Mahabo sy Rasolomampionona Hasimpirenena, voafidy tao Fandriana, ry Razanamahasoa Christine, filohan’ny Antenimierampirenena.
Nandefa taratasy fangatahana any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) mikasika ny tokony hanendrena izay olona hisolo ny toeranan’iretsy depiote migadra iretsy izy, tamin’ny 6 febroary lasa teo. Aorian’ny didy havoakan’ny HCC anefa vao afaka manapa-kevitra ny Antenimierampirenena.
« Naman’ny manala tena, avy hatrany, ny solombavambahoaka tsy tonga mivory mandritra ny roa volana kanefa tsy manana fahazoan-dalana, araka ny fitsipika anatiny efa nolaniana ato amin’ny Antenimierampirenena. Tsy fahatongavana mivory intelo noho ny tsy fahasalamana, na famonjena raharaham-pianakaviana, na fandehanana mamita iraka no azo ekena », hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Efa hatramin’ny nahalany azy ho depiote, tamin’ny volana jolay 2019, anefa no tsy niakatra teny amin’ny lapan’i Tsimbazaza mihitsy iretsy solombavambahoaka roa iretsy. « Tokony hisolo ny toeran’izy ireo ny lisitra faharoa miaraka aminy. Andrasana izay didy havoakan’ny HCC satria tsy manam-pahefana ny hanapaka alohan’ity rafi-pitsarana ity izahay », hoy hatrany ny filohan’ny Antenimierampirenena.
Tsiahivina fa efa nomelohin’ny Fitsarana, tany Morondava, hanefa sazy dimy taona an-tranomaizina ny depiote Raveloson Ludovic. Raharaha maro samihafa, toy ny vono olona, trafikana hazo sarobidy, fandrahonana ho faty… no hiampangana azy. Efa notanana am-ponja tany Morondava nanomboka ny19 mey 2019 izy saingy nahazo fahafahana vonjimaika, tamin’ny herinandro lasa teo. Andro vitsy toarian’izay ihany no namoahan’ny Fitsarana any Morondava ny didy fampisamborana azy indray.
Tamin’ny volana avrily 2019 kosa no nanomboka notanana am-ponja vonjimaika, etsy Antanimora, Rasolomampionona Hasimpirenena. Voarohirohy amin’ny raharaha fivarotana ny tany misy ny « villa Elisabeth », trano nonenan’ny Filoha teo aloha, tompolahy Zafy Albert, izy.
Famendrahana fanafody eto an-drenivohitra
Fandrabirabiana sy fitsikerana Tezitra tamin’ireo mpanatsatso ny Filoha Rajoelina
Baolina lavalava – « Gold Top 20 » :: Voahosotra ho tompondakan’ i Madagasikara fanindiminy ny Cosfa